Ficus | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Ịmụ ihe na-akpata ịda ogbenye nke ficus Benjamin
Benjamin Ficus bụ osisi shrub (ma ọ bụ osisi) mgbe nile nke Ficus genus na ezinụlọ Mulberry. A na-ahụkarị ihe dị iche iche site na njedebe ya na ọ nwere ike itolite n'ụlọ dị ka ụlọ osisi. Ọ na-eji nwayọọ na-amịpụta ma na-achọpụta mma n'ime ime ụlọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla. Ma, n'agbanyeghị na ọ dịchaghị mkpa, ọ ga-achọ nlekọta kwesịrị ekwesị.
Ụdị nke ficus Benjamin
Benjamin Ficus, nkọwa nke ụdị Ficus Benjamin dị iche iche bụ ụdị anụ ọhịa ọ bụla dị na ezinụlọ mulberry ezinụlọ. Benjamin Ficus na okike nwere ike iru 25 mita n'ịdị elu, na ụlọ 2-3 m. Ya mere, a na-ejikarị osisi ndị a eme ihe maka ịkụ ihe ọkụkụ. Mgbe ị na-eto eto a, enwere ike ịnye ụdị dị iche iche na steam.
Ọrịa bụ isi nke roba osisi ficus, ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ficus na-arịa ọrịa
N'okpuru ọnọdụ okike, osisi roba osisi roba bụ osisi osisi nke nwere okpukpu lush nke toro ogologo mita 50 n'ogologo. Ọ na-etolite na mba ndị na-ekpo ọkụ n'èzí dị n'ebe ndịda Indonesia, ebe okpomọkụ na Eshia, na n'ebe ọwụwa anyanwụ India. Mmasị Na narị afọ nke 19, a na-amịpụta roba sitere na ihe ọṅụṅụ nke ficus.
Ọtụtụ ndị na-achọ ịchọta ụlọ ahụ na okooko osisi. Ma ịchọta otu ụlọ gbara ọchịchịrị anaghị adị mfe mgbe niile: ịchọrọ ịchọta osisi ndị ahụ ka ọnọdụ ndị ị ga-etinye ha dị mma. N'okwu a, ọ bụ naanị ụda kachasị ọkụ na okooko osisi ndị a na-agbakọta na isiokwu a ga-eme. Adiantum Adiantum bụ nke adiant Adiant na ọ bụ perennial fern.
10-nke bara uru nke ime ụlọ na foto na nkọwa
Okpokoro okooko osisi nwere ike ịbụ ọ bụghị naanị nnukwu ihe mgbakwunye na nke ụlọ gị, kamakwa ihe bara uru. Osisi ndị a na-eme ka ikuku dị mma maka ụlọ gị, tinye ụcha n'ime ime ma nwee obi ụtọ n'oge ọ bụla n'afọ. Ihe bara uru bụ okooko osisi ndị ahụ nwere ike ịba uru maka ahụike mmadụ.
Otu esi echebara ficus Abidjan n 'ulo
Ficus Abidjan (Ficus Abidjan) - otu n'ime osisi ndị na-emekarị n'ime ụlọ, nke nwere ogologo oge n'ịhụ ndị na-elekọta ubi n'anya. Ọ dị mma na ụlọ na n'ọfịs, na-achọ ụlọ ahụ mma ma na-enye ya ntakịrị ihe. Na osisi a nwere obi ụtọ ndị nwe ya n'afọ niile, ọ dị mkpa ka ị mara otú e kwesịrị isi elekọta ya.
Kwesịrị ịsị ficus n'ụzọ zuru oke n'ụlọ
Benjamin Ficus nwere ike ịchọta ya n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọ bụla ebe ụlọ osisi dị. Ọtụtụ ndị hụrụ ụlọ elu n'anya na-adọta mmasị na ịma mma ya. Ma ọ bụghị ndị na-eto eto na-ama ma ọ ga-ekwe omume ido osisi a ka ọ bụrụchaa na nhazi. Ficus bụ osisi dị ogologo, nke dị elu, nke nwere nlekọta kwesịrị ekwesị, agaghị agafe 2 mita.